नयाँ बर्षको शुभकामना !!! « paniphoto
« ‘मेजोँ चान्स’ शान्ति प्रक्रिया पछाडि नफर्कने गरी अगाडि बढेको छ -प्रधानमन्त्री »	नयाँ बर्षको शुभकामना !!!
By -दिपध्वनी- on Friday April 13, 2012	आराम कुशल होस् । उन्नती प्रगती होस् । शान्ति अमनचैन कायम रहोस् । हासोखुशी छाइरहोस् । पानीफोटोको तर्फबाट नयाँ बर्ष २०६९ को सबैलाई मंगलमय शुभकामना !!!
« ‘मेजोँ चान्स’ शान्ति प्रक्रिया पछाडि नफर्कने गरी अगाडि बढेको छ -प्रधानमन्त्री »	8 comments to नयाँ बर्षको शुभकामना !!!
· जवाफ दिनुहोस्	नयाँ बर्षको शुभकामना ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Sazita
· जवाफ दिनुहोस्	happy new year to all paniphoto family.
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Ramitaram Chauhan
· जवाफ दिनुहोस्	नयाँ बर्ष २०६९ ले सबै नेपालीमा मंगल गरोस् ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	लालबहादुर खाती
· जवाफ दिनुहोस्	गद्दाफीको जस्तो बेहाल नहोस्!
बिनलादेनको जस्तो काल नहोस ”
ज्ञानेन्द्रको जस्तो हाल नहोस….
होस् त ,,,,,
बाराक ओबामाको जस्तो सान होस्
बुद्धको जस्तो ज्ञान होस्
गान्धिको जस्तो मान होस् ,,,,,
,,,,,नया-बर्ष २०६९को पावन अबसरमा समस्त दाजु भाई,दिदी बहिनिहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्द्छु ,,,,,
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	अविनाश बोगटी
· जवाफ दिनुहोस्	पहिलेको भन्दा पनि राम्रो होस् यो बर्षमा । पानीफोटोलाई नयाँ बर्षको शुभकामना सहित प्रगतीको कामना ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Madan Bohora
· जवाफ दिनुहोस्	सबैलाई नयाँ बर्षको धेरै धेरै शुभकामना /
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	ranjit magar
· जवाफ दिनुहोस्	यही बर्ष २०६९ ले सबैमा जोस जाँगर उमंग तथा धैर्यधारण गर्ने शक्ति देओस् तथा दुखमय स्थितीमा गुजार्दै गरेको हाम्रो देश नेपालमा नयाँ संविधान बनेर सम्पुर्ण नेपाली जनता वा नेपाली आम नागरिकले स्वतन्त्र जिउँन पाउँने हक अधिकार सुनिश्चित गरोस् भन्दै सम्पुण देशवासी तथा आप्रवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी अनि आमा बुबामा सुस्वास्थ्य तथा दिर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछु ।
शनिश्चरे २ हाल दुबइ
· जवाफ दिनुहोस्	नयाँ बर्ष २०६९ को उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गर्दछु पानीफोटो परिवार अनि सञ्चालकलाई । जसले नयाँ नयाँ सत्य समाचारहरु हामी सामु पस्किने गरेको छ । सँधै भरी यसरी नै अघि बढिरहोस् । यही नै मेरो शुभकामना ।
यही Category बाटर पनि, फागुमा असाध्यै रमाइलो हुन्थ्योआधुनिक आँखामा कृष्ण लिलाममीको ‘अचुक अस्त्र’ले म यसरी धेरै समय तह लागेपहिलो भ्यालेन्टाइन्स डे – संस्मरणविजया दशमीको शुभकामना !!!कुन देशमा कति बजे छ टिकाको साइत ?नर्बेमा मध्यरातमा घाम ?जादुगर सर – संस्मरणबुद्ध जयन्ति, मेरो वाइफाइ र तिनको सामान्य ज्ञानआमा ! सञ्चै हुनुहुन्छ ?Online Users5 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार